राधी विद्युत कम्पनीको एजीएम सुरु, १०% बोनसका साथ अरु के–के प्रस्ताव पेस गरिँदै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » राधी विद्युत कम्पनीको एजीएम सुरु, १०% बोनसका साथ अरु के–के प्रस्ताव पेस गरिँदै ?
काठमाडौं - राधी विद्युत कम्पनीको साधारणसभा आज ११.३० बजे सुरु भएको छ । कम्पनीको साधारणसभा अमृतभोग क्याटरिङ कालिकास्थान, काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सभामा कम्पनीले १०% बोनस सेयर पारित गर्ने विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ । कम्पनीले बोनसमा लागेको कर तिर्नको लागि ०.६% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पनि पेश गर्दैछ ।
कम्पनीको जारी पुँजी ४१ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याउनको लागि प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने पनि सभाको एजेन्डा हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान लगायतका विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव पनि छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अर्को एजेन्डा पनि राखिएको छ ।